ဒေးစွန်ပါဆရာတော်ကြီးရဲ့ အံ့ဖွယ်ရာများ ဂမ္ဘီရဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ် ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ ပျံလွန်တော်မူသွားတာ ၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဒီလောကကြီးထဲမှာ တန်ခိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ ဖူးထိုက်သူတွေ ဖူးခွင့်ရကြမှာပါ။ ဆရာတော်ကြီးကဒေးစွန်းပါမှာ တစ်လှည့် ဧရာဝတီတိုင်းက ဂဏိမ်းကွင်းကြီးရွာမှာ တစ်လှည့် သတင်းသုံးပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဘွဲ့နံမည်ကဘဒ္ဒ န္တနန္ဒာသဘလို့ခေါ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်က လူများပြောစကားအရ ကောင်းကင်မှာကြွသွားသည်ကို မြင်ဖူးသူများရှိကြပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးဟာ […]
ဆိုင်တန်းပေါ်တွင် သိပ်ထားသည့်.. ခြောက်လသမီးလေး.. အက်စစ်ပုံးထဲ ပြုတ်ကျသေဆုံး…
ဆိုင်တန်း စားပွဲပေါ်တွင် သိပ်ထားသည့် ခြောက်လသမီးလေး အက်စစ်ပုံးထဲ ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားမှု ဖိလစ်ပိုင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဘာကိုလော့ဒ်မြို့ရှိ ဈေး တွင် အဆိုပါ သွေးပျက်ဖွယ် မတော်တ ဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေး မိဘများအမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာကို ရဲ တပ်ဖွဲ့ကထုတ်မပြောပေ။ ဖြစ်ပုံမှာ ဤသို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ဇနီးမောင်နှံသည် ထိုနေ့ […]
ဒီအန်အေ မတွေ့ဘူးဆိုပြီး ဘာလို့ ကြိုသိနေတာလဲ ဒါဂျာနယ်တစောင်ကို တရားဝင်ပြောထားတဲ့ စကားနော်ဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ ချစ်သုဝေကတော့ အနပညာအလုပ်တွေကိုလဲ အဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်နေသလို ကြော်ငြာတွေကိုလဲ ရိုက်ကူးနေရတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အနပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အနပညာအလုပ်တွေကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေသလို ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်စုံတွဲပဲ […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောလာတဲ့ ဇဏ်ခီ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကတော့ ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပဲ အခုအချိန်ထိ တရားခံကို ဖမ်းမမိသေးပါဘူး။အဆိုပါအမှုကိုတော့ အနုပညာရှင်တွေ၊ နာမည်ကြီးလှုပ်ရှားသူတွေအားလုံးက တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ကူညီနေကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီက နေပြည်တော်က သမီးလေး Victoria […]
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီယား အတွက် အဆိုတော်လင်းလင်း ပွဲကြမ်းပြီ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီယား အတွကလင်းလင်းက ခုလိုPostတင်ထားပါတယ်“ဗစ်တိုးရီယားလေးအတွက်ဗစ်တိုရီးယားများစွာက ဝိုင်းဝန်းကြတာပါ။ ဝိုင်းတွန်းကြတဲ့ဒီအရွှေ့ ရွေ့ကို ရွေ့ရမယ်။၃၇၆ နဲ့အတူ ၁၀၉ နဲ့ ၁၁၄ […]
မူကြိုကလေးငယ် မဖွယ်မရာပြုခံရမှုဖြင့် DNA စစ်ဆေးပြီးသူများတွင် ကျောင်းတာဝန်ရှိသူ၏ သားနှစ်ဦးပါဝင် Monday, July 1, 2019 နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှ မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်ခံရသည့်အမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မျိုးရိုးဗီဇ (DNA) စစ်ဆေးခံရသူများထဲတွင်လူမှုကွန်ရက်၌ စွပ်စွဲခံနေရသည့် ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး၏ သားနှစ်ဦးပါဝင်ကြောင်း ကျောင်းအုပ် ဦးပညာက […]
“အနှိပ်စက် ထိုင်ခုံမှာ အနှိပ်ခံနေရင်း စက်ချို့ ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး လည်ပင်း ညှပ်ဝင်သွားတဲ့ အမျိုးသားကြီးး” ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နာမည်ကြီးကုန်တိုက်တစ်ခုတွင် ပိုက်ဆံထည့်ကာ အသုံးပြုနိုင်သည့် အနှိပ်စက်ထိုင်ခုံတစ်ခုတွင် အမျိုးသားကြီးတစ်ဦး အနှိပ်ခံနေစဉ် စက်ချို့ယွင်းပြီး အနှိပ်စက်ဘီးလုံများထဲသို့ လည်ပင်း ညပ်ဝင်သွားတဲ့ ထိတ်လန့်စရာ အဖြစ်ပျက်တစ်ခု ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ […]
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့တော်တစ်ခုလုံး ရေခဲပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ ရေခဲမိုးရွာသွန်းမှုကြီး.
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့တော်တစ်ခုလုံး ရေခဲပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ ရေခဲမိုးရွာသွန်းမှုကြီး. မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့တော်တစ်ခုလုံးကိုရေခဲပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ မိုးသီးရွာသွန်းမှု မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက မြို့တော်တစ်ခုမှာ မိုးသီးပါဝင်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြိး မြို့တော်တစ်ခုလုံးမှာ ၅ပေအမြင့်ရှိတဲ့ရေခဲပြင်ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ လမ်းတွေဟာလုံးဝသွားလာလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ Jalisco ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် Guadalajara မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ မြို့ရဲ့အချို့သောအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ၁.၅မီတာအမြင့်ရှိတဲ့အထိရေခဲနဲ့နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီး နေရာတော်တော်များများမှာတော့ ၅ပေခန့်အမြင့်ရှိတဲ့ ရေခဲနဲ့နှင်းတွေဟာ ကားလမ်းမပေါ်ကသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကားတွေကိုပါဖုံးလွှမ်းလိုက်ပြီး ကားမောင်းသူတွေဟာ […]
သမီးတယောက်ရဲ့ အမေအဖြစ်ရှိနေတဲ့ အူဝဲအတွက်တော့ အရမ်းခံစားရတယ် အမှုမှန် အမြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေ ဆိုတဲ့ “အိန္ဒြာကျော်ဇင်”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်း တရားဥပဒေစိုးမိုးစေရန် အကြီးအကဲများကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အူဝဲ… အူဝဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ပရိတ်သတ်အများဆုံး မင်းသမီးတက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ အပြင် သူမဟာ သမီးလေးတယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ မိခင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မှာတော့ သူမက သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကို ပြင်းထန်စွာ […]
၅ ကြီမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲမှ ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး
၅ ကြီမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲမှ ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး တိုက်ရန် ၅ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု င ၉၂၈၁၇၇ သိန်းတစ်သောင်းဆု ကခ ၆၈၇၉၈၄ သိန်းငါးထောင်ဆု ခ ၂၄၅၈၀၀ ဈ ၃၀၁၉၇၉ သိန်းနှစ်ထောင် ခ ၃၅၉၁၉၁ ဃ […]